UVavi ugxeka eyomthetho wokuvikela uZuma | Isolezwe
UVavi ugxeka eyomthetho wokuvikela uZuma
Isolezwe / 16 November 2012, 2:17pm /
ININGIZIMU Afrika ngeke ikwazi ukubhekana nesimo esifana nesaseZimbabwe lapho uMengameli wakhona ethathwa njengomuntu ongaphezulu kwabanye futhi ongeke agxekwe.
Lokhu kushiwo nguNobhala weCosatu kuzwelonke, uMnuz Zwelinzima Vavi, ngesikhathi ephawula ngodaba olukhulunywe ngumbutho we-SACP KwaZulu-Natal wesekwa nguNobhala we-SACP, uMnuz Blade Nzimande, ophakamise ukuthi akube nomthetho ovimbela ukuthukwa kukaMengameli Jacob Zuma.
UVavi uthe akekho umuntu okufanele athukwe kungakhathaleki ukuthi unguMengameli noma uyisakhamuzi nje sezwe.
Uthe ukungathukwa kwabantu kufanele kwenziwe yiwo wonke umuntu kuhla-nganisa abasuke betelekile, yilabo abangasebenzi noma “ingane engakazalwa”.
I-SACP kulesi sifundazwe ithe kumele kube nomthetho ovimbela ukuthi uMengameli wezwe athukwe noma yikanjani ukuze kuvikelwe isithunzi sehhovisi lakhe.
UNzimande utshele iphephandaba elinguzakwabo weSolezwe ukuthi umthetho ovimbela ukuthukwa kukaMengameli uyadingeka ngoba kunabantu abamhlo-phe abangakamhloniphi namanje umuntu omnyama namasiko akhe.
UNzimande weluleke ngokuthi ukuqhubeka nokuthi kuvunyelwe abamhlophe bathuke uZuma kuzogcina kudale okukhulu ukuthukuthela kubantu abamesekayo okungaphetha ngokuthi kube khona ukushuba kwesimo okuzophazamisa lokho osekuzuziwe kusuka ngo-1994.
UNobhala we-SACP KwaZulu-Natal, uMnuz Themba Mthembu, uthe ukuqubuka kwalolu daba kwenziwe ukuthi uZuma usethukwe kakhulu kuhlanganisa ngisho nendlela ebekwe ngayo esithombeni esasiveza ubuntu bakhe i-The Spear. NoVavi uthe banyanyiswa yisithombe hhayi ngoba siveza uMengameli kodwa ngoba sasisukela umuntu.
“Asifuni ukwelekelela umthetho ozonakekela umuntu ngqo ngoba umthethosisekelo uthi bonke abantu bayalingana kuleli,”kusho uVavi.
Uthe eZimbabwe basebenzisa umthetho ukuze bavimbe noma yikuphi ukuphikiswa okubhekiswe kuMengameli (uMnuz Robert Mugabe) futhi akafuni nhlobo lokho kwenzeke eNingizimu Afrika.